Movie na akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo. | Gam akporosis
Usoro na ihe nkiri
Budata nke kacha mma na akwụkwọ ahụ aja n'ihi na gị gam akporo. Hazie mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba gị na sistemụ arụmọrụ Google nke nwere otu akwụkwọ ahụ aja nke ihe nkiri na usoro kachasị ele anya n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inwe ndị protagonists nke usoro ọkacha mmasị gị ma ọ bụ ihe nkiri na ekwentị gam akporo gị, mgbe ahụ nhọrọ a nke nzụlite ga - eme gị obi ụtọ. Anyị na-achọta ego nke sagas kachasị ewu ewu na usoro nke oge a. Nwere ike iburu ha na ekwentị mgbe niile.
Na gallery dị n'okpuru ebe a, ị ga-enwe ike ịchọta akwụkwọ ahụ aja kacha mma na usoro a na usoro ihe nkiri, dị na mkpebi kacha mma. Họrọ nke kacha mma dabara na ekwentị gị!
You na-achọkwu mbadamba akwụkwọ ahụaja ma obu maka ekwenti? Na njikọ nke anyị tinyere gị, ị ga-ahụ ha.